जापानी कल्याणकारी (शोडो) | Experience Japan
› ब्लग Nepali › जापानी कल्याणकारी (शोडो)
जापानी कल्याणकारी (शोडो)
सबै भन्दा सांस्कृतिक गतिविधिहरु जस्तै, जापानी सुलेखन वा Shodo वर्ष सयौं विकास गरिएको एउटा कला रुप हो। सीधा “लेखन को बाटो” मा अनुवाद र एक मसी ब्रश डूबा प्रयोग वर्ण लेखन को परम्परागत तरिका हो Shodo।
जापानी सुलेखन वास्तवमा 600 AD अघि चीन मा सुरु भयो। जापानी वर्णमाला, वा कांजी, चिनियाँ वर्ण को यात्री चिनियाँ लेखन साझेदारी गर्दा बनेको छ। इतिहासकारहरूले यस जापान बौद्ध फैलाउने लिङ्क थियो विश्वास गर्छन्। जापान आफ्नै वर्ण, हिरागाना भनिन्छ विकास पछि, Shodo कविता, दर्शन र अन्य अमूर्त अवधारणाहरु को टुक्रा रंग र प्रदर्शन गर्न थप सुशील भयो रूपमा यसको आफ्नै कला फारम मा विकास गरे।
Shodo अवधारणा र शब्द संग्रह:
Bunchin: वजन बारहरू कागजतल पकड जस्तो
Fudeकि:ब्रश बांस र घोडा बालबनेको:
Hanshi कालो मसीमा लेख्न प्रयोग कागज
हिरागानाविशेष:जस्तै वर्णमाला अक्षरहरूकार्य कि जापानी
कांजीवर्णचिनियाँ वर्ण कि जापानी वर्णमालाको एक भाग
Suzuri: मसीसिर्जना गर्न प्रयोग मसी पत्थर
केही पश्चिमी दर्शकहरुको पनि बुझ्न सक्छ किछ कि यो शब्द लेख्न एक मसी ब्रश वा fude प्रयोग गरेर, पेन वा पेन्सिल प्रयोग लेख्न सजिलो छ, जबकि वा वाक्यांश वर्ष र परिपूर्ण गर्न अध्ययन को वर्ष पनि समावेश छ। यो भने प्रत्येक व्यक्ति हुनेछ एक फरक तरिका मा ‘रंग’, र एक व्यक्ति हुनेछ ‘रंग’ नै शब्द फरक कारण एक विशेष समयमा आफ्नो मुड गर्न।
Shodo चित्रकारी त्यो तपाईं घरमा गर्न सक्छन्:
1 भेला कालो रंग, कागज, अखबार पृष्ठ र ठूलो paintbrush को सफेद टुक्रा। कुनै पनि ठूलो रंग ब्रश ठीक छ, तर परम्परागत ब्रश बांस र घोडा कपाल बाहिर गरिएको थियो।
अनलाइन जापानी वर्ण2हेर भनेर रंग गर्न चाहनुहुन्छ। म संग http://web-japan.org/kidsweb/virtual/shodo/shodo03.html छ बन्द सुरु गर्न अनलाइन उदाहरण र राम्रो वेबसाइट जाँच थियो।
3. स्थान कागज तल अखबार। टेप गर्न अखबार र कागज तल जस्तै केही। परंपरागत, तिनीहरूले कागज माथि bunchin वा वजन तल आयोजित थिए।
4 तपाईं बस्न निर्णय भने, तपाईं सीधा बस्नुभएको गर्न आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो फिर्ता कुर्सी छुन सक्नुहुन्छ हुँदैन भने आफ्नो खुट्टा भुइँमा चेप्टो हुनुपर्छ, र। यो स्थितिमा रंग गर्न ठीक छ, तर परम्परागत Shodo चित्रकला बसिरहेका कलाकार छ। तपाईंको अर्कोतर्फ अझै पनि कागज पकड मदत गर्नुपर्छ।
5 अब यो ब्रश टिप्न समय। को ब्रश सामान्य कलम वा पेन्सिल जस्तै आयोजित छैन। यो एक सीधा स्थितिमा औंठी, सूचकांक औंला र मध्य औंला बीच आयोजित गर्नुपर्छ। यसलाई आफ्नो घन्टी औंला मा आराम गर्नुपर्छ र आफ्नो हात कुनै पनि समयमा कागज छुन हुँदैन।
तपाईं रंग अघि6आफ्नो ब्रश संग हावा मा आफ्नो रंग स्ट्रोक अभ्यास। जापानी वर्ण संग, स्ट्रोक अर्डर महत्त्वपूर्ण छ र तपाईं सुरु गर्नु अघि तपाईं स्ट्रोक अर्डर थाहा हुनुपर्छ। आफ्नो अनलाइन उदाहरण के आदेश तपाईं आफ्नो रेखा वा स्ट्रोक गर्नुपर्छ व्याख्या गर्नुपर्छ।
7 अब यो रंग गर्न समय! यदि यो Shodo गरिरहेको आफ्नो पहिलो पटक हो तपाईँलाई भयातुर हुन सक्छ। आफैलाई तनावमुक्त राख्न र चिल्लो breaths लिन। मध्य स्ट्रोक रोक्न छैन – यो रंग को ब्रश बन्द पतन बाटो परिवर्तन। बरु आफ्नो सबै आन्दोलनहरु गरेको नभएसम्म जाँदै राख्नुहोस्। यसलाई फिर्ता जान र एक पटक आफ्नो स्ट्रोक समाप्त आफ्नो सुलेखन वा चित्रकला ‘स्पर्श अप’ अशिष्ट छ।
8 दोहोर्याउनुहोस् तपाईं आफ्नो सुलेखन चित्रकला संग खुसी छन् सम्म। यो तपाईं ब्रश आन्दोलनहरु र स्ट्रोक अर्डर महसूस परिचित छन् सम्म केही समय लाग्न गर्छ। निस्सन्देह, यी कदम एक गाह्रो जापानी वर्ण फेरि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै पुस्तकहरु र यो नयाँ गतिविधि गर्ने प्रयास गर्दा तपाईंलाई सहयोग गर्न उपलब्ध किरा हो।
Shodo बारेमा मजा तथ्य:
1 जापानी विद्यार्थीहरूको Shodo स्कूलमा विषय रूपमा सिक्न – तपाईं हस्तलेखन कक्षाहरू समयमा के हुन सक्छ जस्तै। तर, यो अक्सर साप्ताहिक कक्षाहरू मा अभ्यास छ रूपमा ग्रेड तीन वा चार रूपमा जवान सुरु। तिनीहरूले Shodo वा सुलेखन कौशल परिपूर्ण सक्नुहुन्छ त्यसैले केही बच्चाहरु पनि दिउँसो क्लब वा सप्ताह कक्षाहरू धाउन।
2. क्रममा Shodo मा एक पेशेवर, तपाईं मध्य विद्यालय र वरिष्ठ स्कूलमा कठिन Shodo पाठ अध्ययन गर्न आवश्यक हुनेछ छलफल गर्न। त्यस पछि, तपाईं विश्वविद्यालयमा सुलेखन र Shodo अध्ययन गर्न आवश्यक हुनेछ। धेरै व्यवसायीक तिनीहरूले मूल कुराहरू retaught गर्ने मास्टर थियो पछि आफ्नो साँचो सुरु अध्ययन भन्छन्।
3. सुलेखन वा Shodo प्रतियोगिताहरु हाल को वर्ष मा धेरै लोकप्रिय बनेका छन्। चित्रकला सट्टा तल बसेर, विद्यार्थीहरूको समूह – सामान्यतया बालिका – जबकि संगीत नाटकहरु सकारात्मक सन्देशहरू रंग। अंक तिनीहरूले रंग कसरी राम्रो आधारित प्रतियोगिता भर दिइन्छ, तर पनि संगीत यसलाई के कसरी राम्रो र कति नृत्य समावेश छ। को रचनात्मकता आफ्नो सानो विशिष्ट कला ब्रश देखि जो संग रंग दुई वा बढी बालिका आवश्यक Mops यो प्रतियोगिता दायरा लागि रंग ब्रश रूपमा अचम्मको छ! चलचित्र Shodo गर्ल्स हेर्न तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने!
4 थुप्रै सामुराई योद्धाहरू, यो सुलेखन कला, साथै अरूलाई सिकाइएको गर्न एक साँचो योद्धा रूपमा मान्यता भइरहेको अघि आवश्यक हुनेछ। अन्य सांस्कृतिक गतिविधिहरु, को बांसुरी प्ले परम्परागत चिया समारोह प्रदर्शन र पनि फूल एक सैनिक प्रशिक्षण सबै क्षेत्रमा योग्य मानिन्छ थियो सही अघि व्यवस्था समावेश।
जापानी वर्ण फरक स्ट्रोक अर्डर छ5तापनि, तिनीहरूले पनि साथै पढेर एक फरक तरिका छ। पश्चिमी संस्कृति मा, हामी बाँकी पृष्ठ पढ्नुहोस्। जापान, बाटो सही बायाँ दायाँ छ पढ्न। यो तिनीहरूले साथै एक पृष्ठ मार्फत लेख्न नै तरिका हो!
6 तपाईं शब्दावली खण्ड देखि सम्झना भने, जापानी विद्यार्थीहरूले वर्ण (वा अक्षरहरू) भनिन्छ हिरागाना र कांजी दुई सेट सिक्न छ। अर्को सेट जापानी विद्यार्थीहरूको सिक्न काताकाना छ आवश्यक छ। यी वर्ण मात्र ‘पश्चिमी’ शब्द अनुवाद गर्न प्रयोग गरिन्छ। अक्षर को तीन अलग अलग सेट सिक्ने कल्पना!
7 Shodo उपन्यास Mieko र पाँचौं खजाना महत्त्वपूर्ण सुविधा छ। Elenor Coerr यो कथा एक जवान केटी सुलेखन प्रेम गर्ने निम्नानुसार, तर कारण चोट गर्न त्यो अब रंग सक्दैन। यो कथा त्यो प्रयास लेखन र फेरि painting को प्रेरणा पाता कसरी बारेमा बताउँछ।
Shodo परम्परा र जापानी लोक कथाहरू आधारित 8 एक खेल प्लेस्टेशन 2, प्लेस्टेशन3र Wii लागि गरिएको थियो। यो Okami भनिन्छ गर्नुपर्छ र तपाईं नाम साझेदारी गर्ने जापानी ब्वाँसो परमेश्वरको रूपमा खेल्छन्। Okami एक जापानी निर्माता परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईं रंग ‘सुलेखन र अन्य रेखाचित्र अस्तित्व आफ्नो fude पुच्छर प्रयोग गरेर।
9 ठ्याक्कै छैन Shodo, सुलेखन को एक समान शैली जापान देखि लोकप्रियता प्राप्त भएको बेला। Sumie वा धुने चित्रकला चित्रकारों एक ब्रश स्ट्रोक मा एक अजिङ्गर को शरीर रंग गर्न सुलेखन को आफ्नो ज्ञान प्रयोग गर्नेहरूलाई छन्। को ड्रागन टाउको पहिलो चित्रित छ, तर ड्रागन बाँकी एक एकल स्ट्रोक संग चित्रित छ – जो, दिशा मा परिवर्तन आवश्यक छ loops, खण्डमा र flicks यसलाई पूरा अघि। यसलाई YouTube मा भिडियो बाहिर जाँच लायक छ।
10 राम्रो अनलाइन तपाईं आफ्नो Shodo यात्रा जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने स्रोत http://shodo-japan.com/ मा पाउन सकिन्छ। यो अनलाइन tutorials र कार्यशालाओं को एक श्रृंखला तपाईं Shodo अभ्यास गर्न आवश्यक प्रविधी र कौशल सिक्न मदत छ। थप परम्परागत सुलेखन वस्तुहरू खरीद लागि एक खण्ड पनि छ। यो वेबसाइट जापान मा आधारित छ – तर त्यहाँ संसारभरिका सयौं छन् रूपमा नजिकको Shodo कार्यशाला लागि अनलाइन हेर्न!
माइकयाजापानी ट्राडिशनम्याकोयाओसाकाजापानीगोलीग्राफजापानीलीमाइकक्याफेमाईको कुर्सीशोडोशूजी